Fitsaram-bahoaka hafa kely :: Nofidian’ny fokonolona ireo dahalo tena raindahiny • AoRaha
Tranga tsy fahita ity niseho tany amin’ny kaominina Bekoratsaka, any Mampikony, tamin’ny 4 sy 8 aogositra lasa teo, ity. Taorian’ ny latsa-bato nataon’ireo mponina no nifidianan’izy ireo an’izay lehilahy heveriny ho dahalo tao an-tanàna. Nivoaka taorian’izany ny anaran’ireo telo lahy noampangain’ny fokonolona fa dahalo raindahiny.
Mifamahofaho ny angombaovao mikasika an’ity tranga tany Bekoratsaka ity. Loharanom-baovao iray no nilaza ny fisian’ny fitifirana avy hatrany ny roa tamin’iretsy voafidy fa dahalo ikoizana iretsy, ny 4 aogositra, ny andro nanaovana ny latsa-bato ihany. Efatra andro taty aoriana kosa no voalaza fa nahatrarana ny fahatelo, ary notifirina ho faty ihany koa.
Loharanom-baovao hafa indray no mitatitra ny fisian’ ny fifidianana sy ny fivoahan’ ny anaran’ireo telo lahy ireo, saingy samy efa tsy hita eo an-tanàna intsony izy ireo, hatramin’izao. Sefo fokontany mihitsy aza ny iray amin’ ireto telo lahy notondroin’ ny fifidianan’ny mponina fa dahalo mampihorohoro azy ireto.
Nosamborina ny roa tamin’ireo lehilahy telo rehefa vita ny fifidianana. Notifirina ho faty, tamin’ny 4 aogositra lasa izy roa lahy ireo. Andro vitsy taorian’izay kosa no nahatrarana ny lehilahy fanintelony, isan’ireo nahazo vato be indrindra. Namoy ny ainy noho ny tifitra ihany koa izy, tamin’ny 8 aogositra lasa teo ito farany.
Nisy tokoa anefa ny fahafatesana olona voalaza fa dahalo tany Mampikony, tamin’ireo daty voalaza ireo.
« Dahalo avy nangalatra omby miisa fito ireo olona telo maty voatifitra ireo. Nitsoaka izy ireo rehefa nokarohina ka izao tra-tehaka izao », araka ny fanazavan’ ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude, lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika.
« Nisy olona telo voalaza fa maty tany an-toerana, araka ny fitarainana nataon’ireo mpikambana ao amin’ny Dina, izay tonga taty aminay. Tsy mbola fantatra ny tena zava-nisy marina fa nandefa olona any amin’io toerana io izahay hampanao fanadihadiana », hoy kosa ny jeneraly Ralaivaonary D’Y La Paix, kaomandin’ny faripiadidiam-paritany Zandarimaria, any Mahajanga.
Fantatra fa olom-boafidy iray no nanaovan’ireo mponina fitarainana noho ny afitsoky ny dahalo. Niafara tamin’io fanaovana latsa-bato io ny raharaha.
Herisetra ara-pananahana :: Lehilahy mpanotra voampanga ho nanolana ankizivavy
Fanafihana mitam-piadiana :: Vehivavy lehibe maty voatifitra